आशा र भय
Vol। 14 नोभेम्बर, 1911। नम्बर 2
आशा र डर।
आशा स्वर्गको ढोकामा विश्राम र देवताहरूको काउन्सिल मा हेरे।
"प्रविष्ट गर्नुहोस्, ओहो चमत्कारी अस्तित्व!" आकाशीय पाहुना कराए, र हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाईं को हो र तपाईं हामीबाट के चाहानुहुन्छ। ”
आशा प्रवेश भयो। उनको बारेमा हावा हल्का र खुशीको साथ खुशी थियो स्वर्गमा अज्ञात अघि। उनकोमा, सुन्दरताले संकेत ग .्यो, ख्यातिले आफ्नो मुकुट राख्यो, शक्तिले आफ्नो राजदण्ड प्रदान गर्‍यो, र सबै चीजहरूको झलकहरू चाहिने चाहिने चीजहरूको झलक अमर भीडको टकटकीको लागि खोलियो। आशाको आँखाबाट सुपारील प्रकाश जारी गरियो। उनी सबैको लागी दुर्लभ सुगन्ध फुकाइन्। उनका इशाराहरू रमाइलो तालमा जीवनको ज्वार उठाउँछन् र असंख्य सुन्दरताको रूपरेखा बनाउँदछन्। उनको आवाजले स्नायुहरूलाई ताजा बनायो, इन्द्रियहरूलाई तीखो बनायो, हृदयलाई खुशीले हरायो, शब्दहरूलाई नयाँ शक्ति दियो, र यो आकाशीय नाचाहरूको भन्दा मीठो संगीत थियो।
“म, होप, जन्मिएको थियो र उनको नाम थॉट, तपाईंको बुबा थियो, र डिजायरले पाले, अन्डरवर्ल्डको रानी, ​​र ब्रह्माण्डको मध्य क्षेत्रहरूका शासक। यद्यपि मलाई यसरी नै हाम्रा अमर अभिभावक द्वारा बोलाइएको थियो, म म अस्तित्वहीन, अभिभावक, र सबैका महान पिताको रूपमा अनन्त छु।
“ब्रह्माण्डको गर्भधारण भएको बेलामा मैले सृष्टिकर्तालाई फुलाए र उनले मलाई आफ्नो अस्तित्वमा सास दिए। विश्वव्यापी अण्डाको इन्क्युबेशनमा, मैले कीटाणुलाई उत्साहित गरें र यसको सम्भाव्य शक्तिहरू जीवनमा जगाएँ। संसारको इशारा र फैशनमा, मैले जीवनका उपायहरू गाउँथे र उनीहरूको सीमितताहरूलाई फारममा परिणत गर्दछु। प्रकृतिको मोडयुक्त टोनमा मैले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताको नाम प्राणीहरूको जन्ममा गाँसें, तर तिनीहरूले मलाई सुन्न अस्वीकार गरे। म पृथ्वीका बच्चाहरूसँग हिंडेको छु र खुशीको प्यानमा मैले थोरै आश्चर्यकर्महरू र गौरवका आवाजहरू बोलेको छु, तर उनीहरूले उहाँलाई चिनेनन्। मैले स्वर्गको लागि उज्ज्वल मार्ग देखाएको छु र मार्गको ताललाई हिर्काएको छु, तर तिनीहरूका आँखाले मेरो ज्योति बुझ्न सक्दैनन्, तिनीहरूका कानहरू मेरो आवाजमा सुन्न पाउँदैनन्, र जबसम्म मैले दिने ईन्धनको प्रकाशमा तिनीहरूमा अमर आगोहरू झर्दैनन्, हृदय खाली वेदाहरू हुनेछन्, म तिनीहरूबाट अज्ञात र अप्रतीश हुनेछु, र ती निराकारतामा तिनीहरू प्रवेश गर्दछन् जसबाट उनीहरूलाई बोलाइएको हो, जुन तिनीहरू आफूले सोचेको द्वारा निर्धारण गरेका थिएनन्।
“जसले मलाई हेर्दछन्, म कहिले पनि बिर्सिएको छैन। हे स्वर्गका छोराहरु मभित्र! मसँग तपाईं आफ्नो आकाशीय क्षेत्रको भोल्टहरूभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ, र अझै कल्पित नभएको रूपमा गौरवशाली र अनपेक्षित उचाइहरूमा जान सक्नुहुन्छ। तर ममा धोका नदिनुहोस्, नत्र भने तपाईंले शिष्टता, निराशा गुमाउनुहुनेछ र नरकको सब भन्दा तल्लो सिksमा खस्नुहुनेछ। अझै, नरक मा, स्वर्ग मा, वा पछाडि, म तपाईं संग हुनेछ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने।
“प्रकट संसारमा, मेरो लक्ष्य भनेको सबै प्राणीहरुलाई अप्राप्यतामा उत्साहित गर्नु हो। म मरणहीन हुँ, तर मेरो रूपहरू मर्नेछन र म मानव जाति नचलेसम्म म सदा बदल्ने रूपहरूमा देखा पर्नेछु। निम्न प्रकट संसारहरूमा म धेरै नामहरू भनेर चिनिन्छु, तर थोरैले मलाई चिन्नेछन् जस्तो म हुँ। सरलहरूले मेरो तिनीहरूका ताराहरूको रूपमा प्रशंसा गर्नेछन् र मेरो ज्योति द्वारा निर्देशित हुनेछन्। सिकिएका व्यक्तिले मलाई भ्रमको रूपमा घोषित गर्छन् र मलाई त्याग्न अस्वीकार गर्छन्। तल्लो संसारमा म उहाँसँग अज्ञात रहनेछु जसले मलाई प्रकट गरेन। ”
यसरी भेलिएका देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दा होप पज भयो। र तिनीहरूले उनको behests unheeding, एक रूपमा खडा।
“आऊ, अति नै इच्छुक मानिस” भनेर प्रत्येकले कराए, "म तपाईलाई मेरो दावी गर्छु।"
"प्रतीक्षा गर्नुहोस्," आशाले भन्यो। “ओह, सृष्टिकर्ताका छोराहरू! स्वर्गका वारिसहरू! जो एक्लै मेरो लागि दाबी गर्दछ उसले मलाई जस्तो गरी चिन्छ। धेरै हतार नगर्नुहोस्। देवताहरूको मध्यस्थता कारण मार्फत तपाईको छनौटमा मार्गदर्शन गर्नुहोस्। कारण बोलपत्रहरू मलाई भन्छन्: म जस्तो छु मलाई हेर्नुहोस्। मलाई बस्ने फारामहरूको लागि मलाई गल्ती नगर्नुहोस्। अन्यथा म तपाईं द्वारा संसारमा भौंतारिन तल बर्बाद भएको छ, र तपाईं मलाई पछ्याउन र सदा दोहोरिने अनुभवमा पृथ्वीलाई खुशी र दु: खमा हिंड्नको लागि तपाईं स्वचालित हुनुहुनेछ जबसम्म तपाईं मलाई प्रकाशको शुद्धतामा पाउनुहुन्न, र फर्कनुहुनेछ, छुटकारा पाउनुहुनेछ मसँग स्वर्गमा। '
“म ज्ञान, धन्यता, मृत्युहीनता, त्याग र धार्मिकताको कुरा गर्दछु। तर मेरो आवाज सुन्नेहरू कोहीले बुझ्नेछन्। तिनीहरूले यसको सट्टामा मलाई तिनीहरूको हृदयको भाषामा अनुवाद गर्नेछन् र ममा सांसारिक धन, खुशी, प्रसिद्धि, प्रेम, शक्ति को रूप खोज्नेछन्। तर, ती चीजहरूको लागि जुन म चाहन्छु तिनीहरूलाई म आग्रह गर्छु। ताकि यी प्राप्त गर्दै र उनीहरूले खोजेको कुरा फेला नपाए, तिनीहरू सधैं संघर्ष गर्दछन्। जब तिनीहरू असफल हुन्छन् वा पुन: असफल भएको देखिन्छन्, म बोल्छु र तिनीहरूले मेरो सोर सुन्नेछन् र फेरि खोज शुरू गर्नेछन्। र तिनीहरूले खोज्छन् र संघर्ष गर्छन् जबसम्म तिनीहरूले मलाई खोज्दैनन् मेरा पुरस्कारको लागि।
“बुद्धिमान हो, अमर हो! ध्यान दिनुहोस्, वा तपाईं मेरो जुम्ल्याहा बहिनी, भय, तपाईं अझै अज्ञात को रूप मा कन्ज्युर हुनेछ। उनको भयानक उपस्थितिमा खाली गर्ने शक्ति छ र अझै पनि तपाईंको मुटुले मलाई तपाईंको आँखाबाट लुकाउँदछ।
“मैले आफूलाई घोषणा गरेको छु। मलाई माया गर्नुहोस्। मलाई नबिर्स। म यहाँ छु। मलाई आफैंलाई लैजानु होस्। ”
ईश्वरहरुमा इच्छा जाग्यो। प्रत्येकमा आशामा केही देखाएन तर उसको जागृत चाहनाको उद्देश्य। बहिरा कारणको लागि र पुरस्कारले ध्यान दिएर हेर्दा, उनीहरू उन्नत भए र अशान्ति भइरहेको आवाजमा भने:
“म तपाईंलाई आशा गर्छु। सदाका लागि तपाईं मेरो हुनुहुन्छ। ”
आशाले आफैंलाई आकर्षित गर्न सबैले साहस देखाए। तर जस्तो कि उसले आफ्नो पुरस्कार जितेको देखिन्थ्यो, जस्तो कि आशा भागे। स्वर्गको प्रकाश आशा संग बाहिर गए।
देवताहरूले हपलाई पछ्याउन हतार गरेपछि स्वर्गको ढोकामा एउटा डरलाग्दो छाया पसे।
"शुरू भयो, खराब उपस्थिती," तिनीहरूले भने। "हामी आशाको खोजी गर्दछौं, एक आकारहीन छाया होइन।"
खाली सासमा छाया कस्सियो:
मृत्युको स्थिरता सबै भित्र पसे। अन्तरिक्ष डरको नामको काँपछाँटको रूपमा कांपियो जुन विश्वहरूको चारैतिर पुनः गूंजियो। त्यो कानाफूसीमा शोकको दु: ख को विलाप, पीडामा विश्वको संचित शोक र विलापको पीडा भोगिरहेका मानिसहरुको निराशा विलाप।
“आऊ,” डरले भन्यो, “तपाईंले आशालाई त्याग्नुभयो र मलाई बोलाउनुभयो। म तिमीलाई स्वर्गको ढोका बाहिर पर्खिरहेको छु। आशा खोज्नुहोस्। उनी केवल क्षणिक प्रकाश, एक फास्फोरसन्ट ग्लो हुन्। त्यसले भ्रममा पार्ने सपनाहरूमा आत्मा जगाउँदछ, र जो उनीद्वारा मोहित हुन्छन् उनिहरु मेरो दास हुन्छन्। आशा गयो। आफ्नो एक्लो स्वर्गमा बस्नुहोस्, देवताहरू, वा फाटकहरू पार गर्नुहोस् र मेरा दासहरू हुनुहोस्, र म तपाईंलाई आशाको निरर्थक खोजमा खाली ठाउँबाट डोर्याउनेछु र तिमीले उसलाई कहिल्यै भेट्टाउने छैनौ। जब उनी इशारा गर्दै र तिमी उसलाई लिन बाहिर पुग्छौ, तिमीले मलाई उसको ठाउँमा पाउनेछौ। मलाई हेर्नुहोस्! डर।"
देवताहरूले डर देखे र तिनीहरू डराए। फाटक भित्र खाली जीवन थियो। बाहिर सबै अँध्यारो थियो, र डर को थरथर काँप्ने स्थान को माध्यम बाट। एउटा फिक्का तारा झिम्कियो र आशाको बेहोश आवाजले अँध्यारोमा छोडिदियो।
“डराउनु हुँदैन। उनी छाया मात्र हो। यदि तपाईंले उनीबारे सिक्नु भयो भने उसले तपाईंलाई हानि गर्न सक्दैन। जब तपाईं जानुहुन्छ र डरलाई हटाउनुहुन्छ, तपाईंले आफूलाई छुटकारा दिनुहुनेछ, मलाई भेट्नुहुनेछ र हामी स्वर्गमा फर्कनेछौं। मलाई पछ्याउनुहोस् र तर्क गर्न दिनुहोस्। ”
भयले आशाको आवाज सुन्ने अमरहरूलाई पनि पक्रन सक्दैन। तिनीहरूले भने:
“आशाको साथ अज्ञात क्षेत्रमा भौंत हुनु राम्रो छ ढोकामा भय संग खाली स्वर्गमा हुनु भन्दा। हामी आशाको पछि लाग्छौं। ”
एक सम्झौता संग अमर होस्ट स्वर्ग छोड्यो। ढोका बाहिर, डरले तिनीहरूलाई समात्यो र तिनीहरूको बोर्यायो र तिनीहरूलाई आशाबाहेक अरू सबै बिर्सिन बनायो।
डरले डर्काएर र अँध्यारो संसारहरूमा भौंतारिन, अमरहरू प्रारम्भिक समयमा तल पृथ्वीमा आए र उनीहरूको वासस्थान लिएर तिनीहरू मर्ने मान्छेहरू बीच गायब भए। र आशा तिनीहरू संग आए। धेरै पछि, तिनीहरूले को हो भनेर बिर्सेका छन् र हुन सक्दैन, आशा मार्फत, तिनीहरू कहाँ आए भनेर सम्झना गर्नुहोस्।
आशा जवानीको मुटुमा फडफडाउँदछ, जसले युवावस्थामा गुलाब-प्रवाहित मार्ग देख्छन्। पुरानो र थकित आशा फिर्ता पृथ्वी मा फिर्ता, तर डर आउँछ; उनीहरूले वर्षौंको वजन महसुस गर्छन् र दयालु आशा तब स्वर्गमा उनीहरूको नजर राख्दछन्। तर जब आशाको साथ तिनीहरू स्वर्गतिर हेर्छन्, डरले उनीहरूको आँखा राख्दछ र उनीहरू गेटवे भन्दा बाहिर देख्दैनन्, मृत्यु।
डर द्वारा संचालित, अमर पृथ्वी बिर्सिनेहरू हिँड्दछन्, तर आशा तिनीहरूसँग छ। केहि दिन, ज्योतिमा, जुन जीवनको शुद्धतामा पाइन्छ, तिनीहरू भयलाई हटाउनेछन्, आशा फेला पार्नेछन्, र आफैंलाई र स्वर्गलाई चिन्नेछन्।